शेर्पा किदुग अमेरिकाको बार्षिक ल्होसार भव्य रुपमा सम्पन्न :: Press Chautari ::
ल्होसारको अवसरमा शेर्पा किदुग अमेरिकाले न्युयोर्कमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । किदुगले गत फेब्रुअरी २० तारिख न्युयोर्कको कुईन्सस्थित द मिकेले पार्टी हलको सभाकक्षमा बहृद् ल्होसार कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रम किदुगका अध्यक्ष दावा जाङ्बु शेर्पाको सभापतित्वमा सम्पन्न् भएको थियो ।
अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत कार्कीले शेर्पा जातिकै कारण सिंगो नेपालकै परिचय विश्वभर छरिएकोे बताउँदै शेर्पा समुदायको खुलेर प्रशंसा गरे । ल्होसार कार्यक्रमकै लागि डिसीबाट न्युयोर्क आईपुगेका डा. कार्कीले प्रवासमा रहेर आफ्नो मौलिक कला र संस्कृति संरक्षण/संवर्द्धनको लागि किदुगले पुर्याएको योगदानको चर्चा गरे । सोहि कार्यक्रममा गेर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरिका अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले आफ्नो भाषा र संस्कृति संरक्षण जोगाउन गर्दै आएको महत्वपूर्ण कार्यको प्रशंसा गरे ।
ल्होसारकै अवसरमा किदुगले विविध् क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने बिभिन्न पाँच व्यक्तित्वहरुलाई बिशेष सम्मान गरेका थिए । यसरी सम्मानित हुनेहरुमा शेर्पा किदुगको गुम्बा निमार्णमा बिशेष सहयोग योगदान पुर्याउने संस्थाका पुर्व अध्यक्ष छोङ्बा शेर्पा खाम्बाचे, खेलकुद तथा किदुगको अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका आङ छिरिङ शेर्पा, ग्लामर तर्फका दा ल्हमु शेर्पा, खेलाडी पर्खिधन राई र नृत्य निर्देशक विजय नकर्मी रहेकाछन् ।
सम्मानित सबैलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा. अर्जुन कार्कीले खदा तथा कदर पत्र प्रदान गरेका थिए । सोहि कार्यक्रममा डा. कार्कीले संस्थाका उपाध्यक्ष ङिमा डेण्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा प्रकाशित स्मारिकाको समेत बिमोचन गरेका थिए ।
मंगलवार, २०७२ फाल्गुन १० गते ०३:१८ / Tuesday, Feb 23, 2016 3:18 am